राम कुमारी झाक्रीले ओलीलाई संसदका ‘हत्यारा’ले औकात अनुसारको काम गरेको भन्दै अरु के-के भनिन?
काठमाडौं- नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसदका रामकुमारी झाँक्रीले संसदका ‘हत्यारा’हरूले आफूहरुलाई गैरसांसद भन्नुमा कुनै आश्चर्य नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
बहुमतको सरकार ढालेर बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीले खाँबो चिथोरिरहेको झाँक्रीको टिप्पणी छ। उनले भनिन्,‘खड्कप्रसाद ओलीको चाहनाले त यत्तिको उभिनु पनि दिनु हुने थिएन। उहाँको चाहनाले मात्रै नहुँदो रहेछ।’विधिसंगत तरिकाले सभामुखले सदन चलाउने उनले बताइन्।
‘उहाँहरुले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको चरित्र गैरराजनीतिक चरित्र हो’, झाँक्रीले थपिन् ‘खड्गप्रसाद ओलीलाई लागेको भए हामीलाई धर्तिमा बाँच्न नदिने थियो होला नि! त्यो सम्भव छ र?’ सरकारमा कहिले जाने? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले आजदेखि संसद्‌मा सत्तापक्षको रोमा बसेको र सरकारका जाने कुरा पार्टीले निर्णय लिने बताइन्।
आफूहरू लक्षित एमालेको नारावाजीप्रति नेकपा एसले भन्यो- अनैतिक र निकृष्ट काम – काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले संसद बैठकमा आफूहरू लक्षित गरेर गरेको नारावाजीलाई नेकपा एसले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक र निकृष्ट काम भनेको छ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘यो आफैं नांगिने हर्कत हो । यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अनैतिक हो ।’ एमालेका सांसदहरुले आफूबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई गैरसांसद भन्दै संसदबाट निकाल्न माग गरेर नारावाजी गरेका थिए।
यसविरुद्ध एमाले अदालतमा पनि गएको छ।श्रेष्ठले भने, ‘आफैं अदालतमा जानु भएको छ र आफैले संसदमा उठाएर निकृष्ट काम गर्नु भएको छ ।’ यस्ता कामको प्रतिवाद गर्नु नपर्ने र आफैं नांगिने उनको जिकिर छ ।